I-Ischemic stroke ngesifo sikashukela se-mellitus kanye nezinkinga ezingenzeka > Izinkinga zesifo sikashukela
Sikunikeza ukuthi ufunde i-athikili ngesihloko esithi: "Ischemic stroke ngesifo sikashukela se-mellitus kanye nezinkinga ezingenzeka" ngamazwana abachwepheshe. Uma ufuna ukubuza umbuzo noma ukubhala imibono, ungakwenza lokhu kalula ngezansi, ngemuva kwendatshana. Uchwepheshe wethu we-endoprinologist uzokuphendula ngokuqinisekile.
Ngabe isifo sikashukela siyandisa ingozi yokushaywa unhlangothi? Kanjani? Ungaziphatha kanjani iziguli ezinje? Yini ukubikezela? Indlela yokuhlela ukondleka ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela?
Isifo sikashukela yisifo lapho amaseli omzimba eyeka khona ukumunca kahle ushukela. Kunezinhlobo ezimbili eziphambili zalesi sifo. Kumaphesenti ayi-10 isifo sikashukela mellitusNgiyathayiphalapho amangqamuzana e-beta emaphephandabeni engakhiqizi i-hormone ebhekene nokufakwa kweglucose - insulin. Ama-90% asele amacala isifo sikashukela mellitusUhlobo IIlapho kukhiqizwa khona i-insulin, kepha izicubu ziba mbala kakhulu kuzo.
Abantu abaningi baye isifo sikashukela - isimo lapho izinga ushukela selivele selivele lalingaphezulu kokwejwayelekile, kodwa hhayi okuningi. Azikho izimpawu noma izinkinga. Iningi lalezi ziguli lihlakulela isifo sikashukela sohlobo II kungakapheli iminyaka eyishumi.
Ayikho ividiyo efundisayo ngalo mbhalo.
Isifo sohlangothi isifo sikashukela mellitus 2 nohlobo 1 kuvame kakhulu ukwedlula kubantu abaphilile, sikhula sisemncane.
Zingakanani izingcuphe eziphakanyiswayo? Ingabe zikhona izinombolo ezithile?
Isifo sikashukela i-mellitus siphakathi kwezimpawu eziyishumi eziphambili zokuhlaselwa yisifo sohlangothi, kanye nokubhema, ukukhuluphala, ukudla okungenampilo kanye ne-atherosclerosis. Ngokugcina amazinga kashukela egazini emazingeni ajwayelekile, unganciphisa ubungozi bokushaywa yi-3.9%.
Ngokweminye imibiko, isifo sikashukela siyiphinda kabili ingozi yokuhlaselwa yisifo sohlangothi, ngaso sonke isikhathi sesihlanu sasesifo sohlangothi esihambisana nalo.
Kungani kwenzeka ukuthi isifo sohlangothi sivele ezigulini ezinesifo sikashukela?
Ukwanda okungapheli kushukela wegazi kuholela ekulimaleni kwemithambo. Le yinqubo eyinkimbinkimbi, engaqondakali ngokuphelele. Ngokuya kububanzi bemikhumbi ethintekile, amaqembu amabili ezinkinga ahlukaniswa:
I-Macrovascular (emikhunjini emikhulu). Udonga lomkhumbi luhlanganisiwe, kufakwa i-calcium kuyo. Amakhemikhali e-cholesterol akhula engaphakathi layo, izingxenyana zegazi zakha isikhathi. Ukulimala emithanjeni yasesikhumbeni kuholela ekuhlaselweni okwesikhashana kweschemic, imivimbo, imithambo yethambo lenhliziyo - kuma-angina pectoris, ukushaya kwenhliziyo.
I-Microvascular (emikhunjini emincane). Lezi zimo zaziwa ngokuthi angiopathies yesifo sikashukela. Okuvame kakhulu i-retinopathy (ukulimala emikhunjini ye-retina) nephropathy (ukulimala emithanjeni yezinso), i-neuropathy (ukulimala kwemikhumbi ekhulisa izinzwa).
Esikhathini esiningi, lapho kukhuphuka ushukela egazini, kuba nesifo sohlangothi lwe-ischemic, lapho kuthi ngenxa yokuvimba umkhumbi, ukugeleza kwegazi endaweni ethile yobuchopho kuphazamiseke. Kepha i-hemorrhagic (ngenxa yeherorrhage) nayo ingavela.
Ezinye izici zobungozi zivame kushukela kanye nesifo sohlangothi. Uma okungenani unemibandela emibili kusuka kuhlu olungezansi, izingozi zakho ziyanda:
Uhlobo lwe- “apula” lokukhuluphala, lapho inqwaba yamafutha angaphansi ishuthekwe okhalweni
ushukela omkhulu wegazi (prediabetes),
Ngakho-ke, lezi zifo zombili zixhumene ngokuqinile. Hhayi kuphela ukuhlaselwa ngokumelana nesifo sikashukela okungenzeka kungenzeka, kodwa futhi okuphambene nalokho.
Kunamaqembu ahlukahlukene emithi yokwelapha isifo sikashukela sohlobo II. Ukusebenza kwabo kuyahluka ezigulini ezahlukahlukene, ngakho-ke ukwelashwa kufanele kukhethwe ngudokotela ngokwahlukana.
I-Biguanide (metformin). Yandisa ukuzwela kwezicubu kwe-insulin futhi kuvimbela ukukhiqizwa koshukela.
I-Thiazolidinediones (pioglitazone). Thuthukisa ukuphendula kwamaseli womzimba kwi-insulin.
ISulfonylurea (Glyclazide, Glibenclamide, Glipizide). Isebenzisa ukukhiqizwa kwe-insulin ama-pancreas futhi isiza umzimba ukuba usebenzise kangcono i-hormone.
Ama-Incretins (exenatide, liraglutide). Izidakamizwa zeHormonal ezandisa ukukhiqizwa koshukela emzimbeni.
I-Alpha Glucosidase Inhibitors (Acarbose). Yehlisa ukugaya nokufaka i-carbohydrate, ngenxa yalokho, ngemuva kokudla, izinga le-glucose egazini likhuphuka kancane.
I-DPP-4 inhibitors (vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin). Vimba i-enzyme DPP-4, ebulala ama -retretin, ngaleyo ndlela ukhuphule izinga labo egazini.
Abalawuli be-glucose abalawulayo (nateglinide, repaglinide). Baphoqa ama-pancreas ukuthi akhiqize i-insulin eningi.
I-SGLT2 inhibitors (canagliflozin, dapagliflozin). Bakhulisa ukuphuma kwe-glucose kumchamo, kunciphisa izinga layo egazini.
Abantu abanenkinga yesifo sikashukela sohlobo I bahlala bedinga imijovo ye-insulin. Ngokuhamba kwesikhathi, isidingo sazo sivela ngohlobo II.
Ukondliwa okufanele kusiza ukunciphisa ingozi yokuhlaselwa yisifo sohlangothi kanye nezinye izinkinga zesifo sikashukela, kuthuthukisa isimo sesiguli uma kwenzeka inhlekelele emithonjeni yobuchopho, futhi kunciphise namathuba okushaywa ubuchopho obuphindaphindwayo.
Manje kufanele ngilahle konke okumnandi?
Lutho neze. Ukudla kwakho kungahluka kakhulu. Izincomo ezijwayelekile zokudla ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela i-mellitus:
Yidla njalo. Musa ukweqa ukudla.
Yidla imifino nezithelo eziningi, okusanhlamvu okugcwele, namagamu.
Gwema ukudla okuqukethe ushukela ongeziwe: funda ngokucophelela lokho okulotshwe ephaketheni.
Ngaphambi kokupheka inhlanzi noma inkukhu, susa isikhumba kuyo. Ungayigcayi inyama - kungcono ukupheka. Ngakho-ke wehlisa ukubanjwa kwamafutha ayingozi.
Yidla izinhlanzi amahlandla ama-2 ngesonto, kepha hhayi okunamafutha noma okuthosiwe.
Zama ukunciphisa izingxenye zezitsha. Kubalulekile ukukhawulela inani lamakhalori.
Utshwala - ngezikhathi ezithile nangokulinganisa. Futhi ngemvume yodokotela kuphela.
Kunikezwe izeluleko eziningilizayo ngokudla kwemikhiqizo oyithandayo yesifo sohlangothi nesifo sikashukela ngudokotela wakho, umondli wezempilo.
Uma umuntu onesifo sikashukela eba nesifo sohlangothi lobuchopho noma, kunalokho, isifo sikashukela sikhula ngemuva kokushaywa unhlangothi, iqiniso lelo, sibi kakhulu kunokuthi ngabe kungesinye salezi zimo esenzeka. Kubi kangakanani, noma kukhona ithuba lokululama? Impendulo yalo mbuzo incike ezicini eziningana:
Ushukela wegazi Ngokwemvelo, uma ihlala ithuthukiswa - lokhu kubi.
Uhlobo lwesifo sohlangothi: ischemic noma hemorrhagic.
Umsebenzi okhubazekile ovele ngemuva kokushaywa unhlangothi.
Izinkinga zempilo ezihlobene: i-atherosulinosis, umfutho wegazi ophakeme, njll.
Isifo sikashukela sikhulisa amathuba okufa kusuka ekushayweni unhlangothi. Ngokusho kososayensi, ngaphezu kwe-20% yabantu ababulawa yisifo sohlangothi bahlotshaniswa nakho. Ngaphezu kwalokho, kwabesifazane lobu budlelwano buqinile kunabesilisa.
Nginganciphisa kanjani ingozi yokuhlaselwa isifo sohlangothi uma ngihlaselwa yisifo sikashukela?
Izincomo zilula impela:
Yidla ukudla okunempilo, okungukuthi, eyodwa enosawoti omncane, amanoni noshukela.
Hola indlela yokuphila esebenzayo. Ukuzivocavoca kusiza ukulawula amazinga eglucose kanye ne-cholesterol, kuthuthukisa impilo.
Gcina isisindo esinempilo. Uma ukhuluphele ngokweqile noma ukukhuluphala ngokweqile, vakashela i-endocrinologist, isondlo. Odokotela bazokusiza wehlise isisindo.
Yekani ukubhema. Kungase kungabi lula, kepha kufanele.
Khawulela umkhawulo wotshwala uze uphelele. Kungcono ukuyinikela ngokuphelele. Uma kungaphumeleli, okungenani unamathele ezimisweni ezinconywe udokotela wakho futhi ungaphuzi okuningi ngesikhathi.
Futhi ithiphu ebaluleke kakhulu: landela izincomo zikadokotela. Yonke into kufanele ibe nengqondo, konke kufanele kube kokulingene. Isifo sikashukela akuyona inkambo lapho kufanelekile ukuzelapha khona. Lokhu kugcwele nemiphumela emibi.
Isifo sikashukela ngemuva kokushaywa unhlangothi - ukwelashwa, ukudla, imiphumela yalesi sifo
Isifo sohlangothi yisifo esibi kakhulu ngokwaso. Imvamisa, uma ukhetha ukwelashwa okungalungile, umphumela obulalayo kungenzeka. Kungakho kubaluleke kakhulu ukusondela kulolu daba ngawo wonke umthwalo.
Uma usiphatha kahle lesi sifo, ungabe usubuyela empilweni ejwayelekile ngemuva kwesikhathi esithile.
Ngaphezu kwalokho, uma isifo sikashukela sixabana phakathi nesifo sohlangothi, ukugula okunjalo kudinga indlela ebaluleke kakhulu ehlangeneyo. Kwesinye isikhathi isifo sikashukela singakhula njengengxaki. Kunoma ikuphi, ukwelashwa okunjalo kuzoba nobungqabavu baso. Udokotela kuphela ongakhetha isethi efanele yezindlela zokwelashwa ngokusekelwe ekuhlolweni, ebheka izici zomzimba ngamunye.
Isifo sohlangothi nesifo sikashukela - le mikhakha ngokwayo iyingozi kakhulu empilweni yomuntu. Uma zenzeka ndawonye, ​​imiphumela ingadabukisa nakancane uma ungaqali ukwelashwa ngendlela esifike ngesikhathi. Kuyadingeka futhi ukuqonda ukuthi yiziphi izici zenkambo yesifo ezizokwenzeka kuleli cala.
Ngokwezibalo, ukunqotshwa kweziguli ezinesifo sikashukela cishe kuyizikhathi ezingama-4-5 kunokukodwa kwabanye abantu (uma sihlaziya imiphakathi efanayo, amaqembu yobudala anokubhekisisa okufanayo nezici eziyingozi).
Kuyaqapheleka futhi ukuthi abantu abangama-60% kuphela abangashaywa. Uma phakathi kwabantu abangenayo isifo sikashukela, ukufa kuwukuphela kwe-15%, khona-ke kuleli cala, ukushona kwabantu kufinyelela kuma-40%.
Cishe njalo (90% yamacala), unhlangothi lwe-ischemic luyakhula, hhayi isifo sohlangothi lwe-hemorrhagic (uhlobo lwe-atherothrombotic). Imvamisa, imivimbo kwenzeka ngesikhathi sosuku, lapho izinga likashukela egazini liphezulu ngangokunokwenzeka.
Okusho ukuthi, uma sihlaziya ubudlelwane bembangela, singaphetha ngokuthi: kaningi kuba yisifo sohlangothi esakheka ngemuva kwesifo sikashukela, hhayi okuphambene nalokho.
Izici eziphambili zenkambo yesifo sikashukela mellitus zifaka:
uphawu lokuqala lungafiphala, izimpawu zande ngokuphelele,
unhlangothi luvame ukwenzeka lube ngemuva kwesizinda somfutho wegazi ophakeme ngokuqinile. Ngenxa yalokhu, udonga lomthambo luba mncane, okungaholela ekuqhekekeni noma ushintsho lwe-necrotic,
Ukulimazeka kwengqondo kungenye yezinkinga ezivame kakhulu ze-pathology,
I-hyperglycemia ikhula ngokushesha, imvamisa ingaholela ekomeni yesifo sikashukela,
I-foci ye-infraalal e-cerebral inkulu kakhulu kunabantu abangenashukela,
imvamisa kanye nesifo sohlangothi, ukuhluleka kwenhliziyo kukhula ngokushesha, okungaholela kalula ekuthuthukisweni kwe-myocardial infarction.
Kwesinye isikhathi isifo sikashukela singakhula futhi ngemuva kokushaywa unhlangothi, kepha imvamisa kunesifo sikashukela. Isizathu ukuthi kungenxa yeshukela ukuthi igazi alikwazi ukujikeleza kahle ngemithambo. Ngenxa yalokho, i-hemorrhagic noma i-ischemic stroke kungenzeka ngenxa yokuxinana.
Kulokhu, ukuvikela kubaluleke kakhulu. Njengoba wazi, noma yisiphi isifo kulula ukusivimbela kunokuthi usisuse.
Esikhathini sikashukela, kubaluleke kakhulu ukulawula amazinga kashukela, ukuqapha indlela odla ngayo, ukulandela yonke imiyalo kadokotela wakho ukuze ungagxibeki esithombeni sasemtholampilo futhi ugweme imiphumela emibi emibi kakhulu.
Ukushaywa unhlangothi akusona isigwebo. Ngokuphathwa okufanele, isiguli kungenzeka sikwazi ukubuyela empilweni ejwayelekile kungekudala. Kepha uma ungawunaki imiyalo kadokotela, ukukhubazeka kanye nokuthatha umhlalaphansi yilokho okulindele umuntu. Hhayi inkambo yesifo kuphela, kepha futhi ngqo ukuthi bangaki abantu abazophila kuya ngokuthi baphendule kanjani kahle ngalolu daba.
Noma ngubani onesifo sikashukela uyazi ukuthi ukondleka kubaluleke kangakanani ngalesi sifo. Uma ukutholwa kwesifo sikashukela kwenziwa, khona-ke ukubikezela ukuthi bangaki abantu abangaphila nokuthi umthelela wokugula uzoba nawo kangakanani empilweni kuyoncika ekutheni ukudla kudlalwa kanjani.
Ukudla okunempilo kwesiguli, uma eba nesifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela, kufanele ngasikhathi sinye senze imisebenzi elandelayo:
yenza ushukela ojwayelekile, uvimbele ukwanda kwezinga lawo, kuyadingeka futhi ukugcina amazinga e-cholesterol ajwayelekile,
vimbela ukwakheka kwama-atherosselotic plaque ezindongeni ze-vascular,
ukuvimbela ukwanda kwegazi.
Eminye imikhiqizo engaba yingozi empilweni yesiguli enale ndlela yokutholwa emzimbeni ihlukaniswa ngokuthi ayenqatshelwe kushukela. Kepha uhlu luzokwandiswa ngamagama angeziwe ukugwema ukuhlaselwa yisifo noma ukuqinisa isimo sesiguli ngemuva kokushaywa unhlangothi.
Imvamisa, iziguli ezinjengalezo zinqunyelwe ukudla okungu-10 - kuhloselwe abantu abanezifo zenhliziyo. Imithetho efanayo izoba zeziguli ezinesifo sohlangothi. Kepha ngasikhathi sinye, uma isithombe somtholampilo futhi sinesisindo sikashukela, kuzodingeka ukukhawulela ukusetshenziswa kwamaqembu amaningi okudla.
Ngaphezu kwalokho, uhla olujwayelekile lwemithetho oluqukethwe kwanoma yikuphi ukudla kweziguli ezinokuhlonza okunjalo kufanele kuqokonyiswe:
udinga ukudla ngezingxenye ezincane izikhathi ezingama-6-7 ngosuku,
kungcono ukusebenzisa noma yimiphi imikhiqizo ngefomu elihlanziwe, elihlanjiwe ngenani elilinganayo le-ketshezi, ukuze ungawenzi umthwalo owengeziwe esiswini,
awukwazi ukudla ngokweqile,
noma imiphi imikhiqizo kufanele idliwe ebilisiwe, i-stewed noma i-steam, kudla okuthosiwe, ukubhema, futhi futhi okunosawoti, izinongo zinqatshelwe ngokuphelele,
kungcono ukunikeza ukukhetha kwimikhiqizo yemvelo enokuqukethwe okuncane kwezinto eziyingozi ukuze unciphise imiphumela emibi emzimbeni.
Kuyisiko ukukhipha uhlu oluthile lwemikhiqizo yokudla, okufanele ibe yisisekelo sokudla kweziguli ezinama-pathologies afanayo, kanye nokudla okungavunyelwe. Ukugcinwa kwale mithetho kuzocacisa ukunqunyelwa kanye nekhwalithi yempilo yabantu.
Imikhiqizo enconyiwe ifaka:
Itiye le-herbal, ama-compotes, ama-infusions kanye nama-decoctions. Kunconywa futhi ukuphuza ama-juices, kepha anciphise ukusetshenziswa kwesiphuzo sehalananda, ngoba kungaba nomthelela ekwandeni kwegazi.
Isobho elinemifino, isobho elibunjiwe.
Imikhiqizo yobisi oluhlaza. I-Kefir, i-cottage shizi ilusizo kakhulu, kepha kungcono ukukhetha ukudla ngamaphesenti aphansi wokuqukethwe kwamafutha.
Imifino, izithelo. Yimifino okufanele ibe yisisekelo sokudla kweziguli ezinjalo. Kepha ukusetshenziswa kwamazambane namazambane kufanele kuncishiswe. Inketho enhle kungaba imifino ecolisisiwe noma izithelo. Esigabeni sokuqala sokululama, amazambane avamile acubuziwe alungele izingane ezizisebenzisela ukondla.
Iporridge. Best uma yobisi. Ilayisi, i-buckwheat, i-oat iphelele.
Uma sikhuluma ngokudla okwenqatshelwe, kuzodingeka ungafaki lezo ezikhulisa ushukela wegazi, kanye ne-cholesterol. Lokhu kufaka phakathi:
Inyama enamafutha (ihansi, ingulube, iwundlu). Zidinga ukushintshwa yinkukhu, inyama yomvundla, ikalikuni. Okufanayo kuhamba nenhlanzi - noma iyiphi inhlanzi enamafutha ayenqatshelwe ukuyidla.
Amalunga, isibindi neminye imikhiqizo efana nale.
Inyama ebhemayo, amasoseji, inyama ekheniweyo nenhlanzi.
Amafutha ezilwane (ibhotela, amaqanda, ukhilimu omuncu). Kuyadingeka ukuthatha indawo ngamafutha yemifino (umnqumo ulungile).
Noma yimuphi amaswidi, namakhekhe. Noma ngabe njengamanje ushukela usezingeni elijwayelekile, khona-ke ama-carbohydrate asheshayo afakwa ngokwezigaba emithanjeni yegazi.
Ukuze ugweme ukugcwala kwengcindezi yegazi, kuzodingeka futhi ungafaki ikhofi, itiye elinamandla, i-cocoa kanye nanoma yikuphi iziphuzo ezidakayo.
Kaningi ezigulini eziqala ukuzidla zodwa ngemuva kokushaywa unhlangothi, kunconywa ukusebenzisa izingxube zokudla okwenziwe ngomumo. Zisetshenziswa uma iziguli zondliwa ngethhubhu.
Uma umuntu ngasikhathi sinye enesifo sikashukela futhi ehlaselwa unhlangothi, khona-ke imiphumela yakhe imbi kakhulu kunakuleyo yonke. Isizathu sokuqala ukuthi ezigulini ezinjalo isifo sohlangothi sivela ngendlela eyingozi kakhulu. Uma isimo singapheli emiphumeleni ebulalayo, khona-ke imiphumela emibi kakhulu njalo ivela:
ukulahleka kwemisebenzi eminingi ebalulekile (ukugwinya, ukulawula ukuchama),
imemori engathí sina, umsebenzi wobuchopho.
Ngokulashwa okufanele, imisebenzi yokuphila ibuyiselwa kancane kancane, kepha ezigulini ezinjalo, isikhathi sokuvuselelwa kwesinye isikhathi sihlala isikhathi eside kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ingozi yokuhlaselwa kaningi noma ukufakwa kwe-myocardial kukhulu kakhulu.
Ngokwezibalo, iziguli eziningi ezinesifo sikashukela ngemuva kokushaywa unhlangothi ziphila iminyaka engaphezu kuka-5-7. Kulokhu, ingxenye yesithathu yeziguli ayikwazi ukubuyela empilweni ejwayelekile, esele embhedeni.
Kukhona nezinkinga ezivame kakhulu ngezinso, isibindi, okuvela ngemuva kwesizinda sokuphuza okukhulu kakhulu kwemithi.
Uma umuntu etholakala ukuthi unesifo sikashukela, kepha ngasikhathi sinye kusengaphambili ekwakhiweni kwesimo sokushaywa unhlangothi, udokotela uzomncoma ezinye izindlela ezingeziwe zokuvimbela lesi simo ukuthi sikhule. Ukuze wenze lokhu, uzodinga ukuguqula hhayi kuphela indlela odla ngayo, kepha nendlela yakho yokuphila. Lolu daba kufanele luhanjelwe ngesibopho esiphelele, ngoba kusuka kulokhu ukuthi ikhwalithi yempilo elandelayo izoncika.
Izincomo eziphambili kufanele zifake:
Inani eliphelele le-cholesterol ezigulini ezinesifo sikashukela kufanele libe ku-3.6-5.2 mmol / L. Uma inkomba iphambukile kokujwayelekile, khona-ke kuyadingeka ukuthi ubonane nodokotela ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ubhekane nesethi edingekayo yokuhlolwa ukuze kutholakale imbangela yempande futhi unikeze ukwelashwa okufanele.
Iphutha elivame kakhulu ukulandela isidlo kuphela njengesinyathelo sokuvimbela ukuvimbela ukukhula kwesifo sohlangothi. Noma iqiniso selivele lenzekile, kuyadingeka kunoma yikuphi ukunamathela kuzo zonke lezi zincomo ukuze ubuyisele emuva imisebenzi eyisisekelo yomzimba ngokushesha, futhi uvikele nokushaywa okwesibili.
Okuqukethwe ushukela omningi kuthinta izindonga zemithambo yegazi, ngakho-ke ukushaywa yisifo sikashukela yinto eyejwayelekile. Emkhankasweni wesifo onamandla, izingxenye zobuchopho ziyathinteka, okuholela ekuhlaselweni kwesibili. Isifo sikashukela sikhulu kunasoshukela kubantu, lokhu kungenxa ye-vascular thrombosis, i-cholesterol plaque kanye nomthwalo ojwayelekile kuwo wonke amasistimu omzimba.
Ingqondo yomuntu idinga ukuhlinzekwa njalo komoya-mpilo ekusebenzeni okufanele kwawo wonke amayunithi enhlaka. Sizungezwe inethiwekhi yemithambo yegazi, ene-blogging noma ukuqhuma komunye wayo, i-izic hypoxia yenzeka. Ukuqagela kuzobe kudumaza, ngemuva kwemizuzu eminingana ye-hypoxia enamandla, amaseli aqala ukufa. Isifo sikashukela sihlukaniswe ngamaqembu amakhulu ayi-2:
hemorrhagic - ehambisana nokuqhuma kwemithambo,
I-ischemic - ukuvaleka kwemithambo yegazi emikhulu.
Ukugula ushukela kuholela ezifweni eziningi, ukwelashwa kwako kuhlanganiswa nezimpawu zomzimba. Isifo sohlangothi nesifo sikashukela zihlobene ngqo. Ezigulini, ibhalansi kasawoti wamanzi iyaphazamiseka, ikakhulukazi ngesifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kungenxa yokuthi ama-molecule eglucose welula uketshezi lwezicubu, umthamo womchamo uyakhuphuka, okuholela ekunxanelekeni njalo. Umzimba wesiguli uphelelwa ngamanzi, izindonga zemithambo ziqine, igazi liqala ukuqina bese liba nokukhula ezindongeni nakuma “plugs”. Inqubo yokululama ekushayweni yisifo sikashukela ihamba kancane, njengoba igazi lifuna iziteshi ezintsha, ezibandakanya imithambo emincane yemithambo. Ukwanda ushukela kuholela ekushintsheni kwe-atherosclerotic emithanjeni yegazi, ukungondleki kanye nokukhuluphala ngokweqile nakho kugcwele imiphumela.
Istroke asisahlotshaniswa nabantu bobudala obudala; kule minyaka eyi-10 edlule, ama-30% eziguli izingane nezingane.
Ukushaywa unhlangothi yisimo esibucayi somzimba, uma kutholakala eyodwa yezimpawu ezisohlwini, kufanele ufune usizo ngokushesha, ngoba imiphumela ingaphenduki. Uma uqala ukwelashwa ngesikhathi, isiguli singase sibuyele endleleni yaso yangaphambili. Lesi sifo sinezimpawu zomlingiswa:
ukuzindla okubukhali kolunye uhlangothi lobuso, izingalo, imilenze,
Ukwahlukanisa ukunyakaza, inkulumo engavinjelwe,
ukonakala kwemishini yokubonakalayo,
ubunzima bokugwinya amathe,
ukuphefumula ngokushesha kanye ne-palpitations,
Ezenzweni zokwelapha, kusetshenziswa umuthi owodwa okufakazelwe - i-tPA (activator izicubu), yakhelwe ukumisa ukuhlaselwa. Esikhathini esedlule kakhulu nje, kwaqhamuka esinye isidakamizwa i-PSD-95, esinomthelela ku- "cork", besingenaso isikhathi sokuzibonakalisa, kepha kuyaziwa ukuthi izidakamizwa zesikhathi esizayo ngeke zibuyisele ukunikezwa kwegazi kuphela, kepha nomsebenzi wezimoto wezingxenye ezithintekile zomzimba. Basebenzelana ngempumelelo nokuqhekeka kwegazi, ngemuva kokulawulwa ngomuthi, izakhi ezisebenzayo ziqeda “i-igazi” bese zibuyisela ukuphuma kwegazi. I-tPA iyasebenza emahoreni ambalwa okuqala ngemuva kokuhlaselwa. Umuthi wenzelwe ukuhlaselwa kwe-ischemic, kukhona futhi nokuphambana. Ayikwazi ukusetshenziselwa ukulimala kwekhanda (hemorrhage, ukulimala kwekhanda) nangemva kokuhlinzwa kusanda kwenziwa.
Kukhona indlela yesibili yokwelashwa - iyasebenza. Kuqukethe ukususwa kwe-plaque, evimba ukuhamba kwegazi kuye ebuchosheni, le ndlela yokwelapha ayisetshenziswa kakhulu. Uma i-carotid artery ivinjiwe, ethwala usongo lwempilo esigulini, khona-ke i-angioplasty inqunyelwe. Ukwelashwa ngemassage kuhlangene nokwelashwa kwezidakamizwa kuzovumela ukubuyisa umthamo osemthethweni oyingxenye. Ezinye izindlela zokususa i-thrombus zisetshenziswa emhlabeni, kodwa ukusebenza kwawo akwaziwa.
Ukudla ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela kufanelekile kulolo hlobo 1 nohlobo 2. Imenyu elinganiselayo yisinyathelo esidingekayo esikuvumela ukuba ubuyisele umzimba futhi unciphise ingozi yokuhlaselwa okwesibili. Inombolo 10 yetafula lesifo sikashukela yathuthukiswa icubungula izidingo ezikhethekile zomzimba wesiguli. Yehlise kakhulu amafutha nama-carbohydrate, futhi yanciphisa inani lamandla emenyu yansuku zonke. Ukudla kokuhlaselwa unhlangothi ezinsukwini zokuqala kuqinile, kungafakwa ukunikezwa ubufakazi bokuthi kudliwe, bese kuthi ngemuva - ukuguqukela ezitsheni ezibunjiwe.
Umsoco wokuhlaselwa yisifo sohlangothi:
Ukuphuza uketshezi. Ngokuphikisana nesizinda sokuphelelwa ngamandla, ukuqina kwegazi, kubaluleke kakhulu ukuphuza isilinganiso sosuku soketshezi. Kusukela kuhlu oluvunyelwe: ama-compotes, ama-juices angagxiliwe, itiye. Amnandi nama-sodas awavunyelwe.
Ukwenqaba imikhiqizo efaka isandla ekuqongeleleni i-cholesterol.
Kuyeke ngokuphelele ukusetshenziswa kosawoti ekuphekeni. Ngemuva kwesikhashana, lapho isimo sibuyele kokujwayelekile, ungangezela ekudleni.
Thatha i-potassium njalo, eqinisa izicubu zenhliziyo nemithambo yegazi.
"I-Vitamin boom", ukondleka ngemuva kokushaywa unhlangothi kumele kufake izithelo eziningi kanye nemifino, zizothambisa umzimba futhi zithathwe kalula ngaphandle kokudala umthwalo ongadingekile. Kubaluleke kakhulu ukuzidla zingavuthiwe.
Ngenxa yokushona kwamangqamuzana obuchopho ngesikhathi sokuhlaselwa, izinhlobo ezintathu zesifo zihlukaniswa:
kuyathandeka, kuvamile ngemuva kwemizuzu engu-2-3,
phakathi nendawo, izinkinga zingenzeka, ukulahleka kokusebenza kwemoto ngengalo, imilenze,
ethuthukayo, ukwaziwa kuza ezinsukwini ezimbalwa.
Imvamisa kuba nezifo zemizwa ezidinga ukwelashwa isikhathi eside. Izinga lokufa kwabantu ngemuva kokuhlupheka lihlala likhula. Futhi futhi ungakhohlwa ukuthi ngokwemuva kwesifo sohlangothi kunethuba lokuthuthuka kwezifo zezinye izitho - inyumoniya, isifo senhliziyo. Ukushaywa unhlangothi okuqhubekayo kubonakaliswa yizimpawu ezandayo, okuzoholela ekugcineni ekhefeni nasekufeni.
Isifo sikashukela yisifo esidinga ukwenama lapho ukukhululeka ngesimo semikhuba emibi, ukudla okubi, nokuphila nje kungamukeleki. Ngokuya ngohlobo lwesifo, udokotela uzonikeza izidakamizwa ezinciphisa ushukela kanye nokudla. Uma ukhuluphele ngokweqile, kuzokwethulwa imithwalo eyengeziwe ethwala imithwalo ye-Cardio yansuku zonke kanye ne-Therapeutic massage. Lokhu kuzosiza ukugcina uhlelo lwenhliziyo luhle futhi nezitho “ezondlayo” “nezithako” zinomoya-mpilo. Kulesi simo, udokotela kuphela ongakwazi ukwenza isibikezelo, kusukela esimweni sesiguli nenqubo yokululama.
Isifo sokulwa nesifo sikashukela: izici zokwelashwa nokuvimbela
Isifo sikashukela sihlala sibangela izimpawu eziningi zemiphumela. Ngokuhlangene, lezi zifo ezimbili zingadala umonakalo omkhulu empilweni yabantu. Ngakho-ke, kungcono ukuvimbela ukukhula kwesifo sohlangothi lapho unesifo sikashukela. Noma, qala ukwelashwa ngokushesha ngemuva kokuqala kwezimpawu zokuqala.
Isifo sikashukela siba imbangela yezifo ezahlukahlukene. Ku-mellitus yesifo sikashukela, izitho ezihlosiwe ziyathinteka, lesi yisistimu yenhliziyo, izinso, izinto ezibonakalayo, ama-capillaries nezinzwa. Konke lokhu kufaka ukuqubuka kwezimo zokugula ezinciphisa inhlala-kahle yesiguli futhi kubandakanya ukungezelelwa kwamanye ama-pathologies, kufaka phakathi unhlangothi.
Ingozi ye-acute cerebrovascular (stroke) yezinhlobo ezimbili:
I-Ischemic - Lesi yisifo sabantu abadala esenzeka ngokugeleza kwegazi okunganele endaweni yobuchopho ngenxa yokushintsha kwe-pathological emithanjeni yegazi. Enye yezizathu eziphambili ushukela.
IHemorrhagic - kuvame ukwenzeka kubantu abasha abanemizwa emisha yokuzalwa noma yokutholwa kwemithambo yegazi, umfutho wegazi ophakeme, ukulimala noma i-neoplasms.
Isifo sikashukela sohlobo 2 kungenzeka ukuthi siholele ekushayweni yi-ischemic. Ikhula ngenxa yokunganakwa kweseli ku-insulin (i-hormone eyehlisa ushukela wegazi). Kulokhu, i-glycemia ephikelelayo iba - ushukela wegazi ophakeme (okujwayelekile: 3.3-5.5 mmol / l).
Uma isiguli singathathi i-hypoglycemic therapy noma singenele, imetabolism emzimbeni iyahlelwa kabusha. Amandla awanele ekuqhekekeni kwe-glucose ngendlela yemvelo, futhi ukusabela kokusetshenziswa kwayo ngendlela engenawo umoya-mpilo kuyabangelwa. Kulokhu, kwenziwa imikhiqizo engaphansi kwe-oxidized: lactate, pyruvate, sorbitol.
Babamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni i-micro- and macroangiopathy ne-polyneuropathy. Lezi izinguquko ze-pathological emikhunjini emincane, lapho udonga lwemikhumbi emincane luphulukana nokuqina kwayo bese esikhundleni sayo ithathelwa izicubu ezithintekayo (ukukhula kwe-microangiopathy). Ukuphazamiseka kwesekhula.
Ngokuphikisana nesizinda sesifo sikashukela i-mellitus, isifo sokuqina kwemithambo yegazi sisuka ngokushesha - isifo lapho ama-atherosulinotic plaque akha khona odongeni lwemithambo yegazi enkulu naphakathi. Bona-ke, banciphisa i-lumen yabo (macroangiopathy). Lezi zimo ziholela ekuphanjukisweni kwegazi okungekuhle ebuchosheni nasekuthuthukiseni isifo sohlangothi.
Futhi, izingxenyana zegazi zingakheka ezindaweni ezi-occlusion. Ngaphezu kwalokhu okungenhla, izici zobungozi zokuthuthuka kwengozi e-acute cerebrovascular ajali ku-mellitus yesifo sikashukela yilezi:
cholesterol ephezulu yegazi,
isifo sezinso (isb. nephropathy),
ukunyuka kwe-lipoprotein esezingeni eliphansi kanye ne-triglycerides egazini,
ukuntuleka kokwelashwa kwe-hypoglycemic.
Ngokuthuthuka ngqo kwengozi ye-cerebrovascular eyingozi, kuvela izimpawu ezilandelayo:
Inkulumo yesiguli iyaxakaxaka, kuphambuka amagama.
Ubuso buba njenge-asymmetrical: ingxenye eyodwa ingaba yangaphansi kunenye, ekhoneni lomlomo lehle, akukho ukubukeka kobuso ngakolunye uhlangothi, ijwabu leso lehla.
Bafundzi bahluka ngebanga.
Lapho uhlola umlomo futhi ucela ukunamathela ngaphandle kolimi - kuphambuka ngendlela eyodwa.
Isiguli singakhohlwa igama noma izihlobo zayo.
Ukwephulwa kokuqwashiswa kwenhliziyo kwenzeka, kuze kufinyelele kugcwala.
Ezimweni ezinzima, kukhona ukwanda noma ukwehla komfutho wegazi, i-tachycardia, ukuphefumula ngokushesha.
Kuvela isenzo sokuphikisana nokuchama.
Uma ngokumelene nalesi simo izinga ushukela wegazi liphezulu kakhulu (ngaphezu kwama-20 mmol / l), kukhuphuka ikoma ketoacidotic. Lapho-ke kude lapho ungezwa khona iphunga le-acetone kusuka esigulini, limbozwe ngesithukuthuku, ukuphefumula kunomsindo. Lesi yisimo esibuhlungu esidinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelashwa kanye nokulaliswa esibhedlela esikhungweni sezokwelapha.
Kaningi, unhlangothi iba minyaka eminingana emva kokukhula kwesifo sikashukela. Ngalesi sikhathi, kukhona ukuhlelwa kabusha kwemikhumbi nokuthuthukiswa kokufakelwa kwaso. Ama-Precursors angaba ikhanda elibuhlungu, ubuthakathaka, ukukhathala, umuzwa wokukhathala ngemuva kokulala, inkumbulo ekhubazekile nesivinini sokucabanga.
Izikhathi ezithile, iziguli zingalahlekelwa ukwazi noma ukuhlangana kwazo kokunyakaza kungaphazamiseki. Lokhu kwenzeka ngemuva kwesizinda sezinamba zeglue ephezulu.
Lapho isiguli singena esibhedlela, kufanele kwenziwe i-compact tomography, ukuhlolwa kwegazi ngoshukela, ama-electrolyte, i-coagulogram, kanye ne-cerebral angiography. Okuvame kakhulu ukwelashwa okulondoloziwe (kwezidakamizwa) kwe-ischemic stroke. Ihlukaniswe yaba yisisekelo futhi yahlukaniswa.
Isigaba sokuqala ukwelashwa okuyisisekelo okuhloswe ngaso ukuqinisekisa imisebenzi ebalulekile yomzimba: ukulawula ukulinganisela kwe-electrolyte yamanzi, ukugcwaliswa kwe-oksijeni kwegazi, ukunciphisa ukuthuthukiswa kwe-edema yamakhemikhali, ukuqinisekisa ukusebenza kohlelo lwezinhliziyo. Lokhu kukhwabanisa akuxhomekile kuhlobo lokushaywa unhlangothi.
Ngemuva kwalokho ukwelashwa okuhlukile kuyenziwa. Kuzoba ngempumelelo kakhulu phakathi kwamahora amathathu okuqala (iwindi lokwelapha). Uma i-ischemia ibangelwa i-thrombus, ukwelashwa kwe-thrombolysis kuyadingeka. Umuthi wokuzikhethela ungumenzeli wezicubu we-plasminogen.
Lapho kuqinisekiswa ukutholakala kwe-ischemic stroke, isiguli sinqunywe i-aspirin. Yehlisa amathuba okuba i-thrombosis ephindaphindayo. Uma ukwelashwa kwe-thrombolysis kuphikisiwe, phendukela ekusebenzeni kokuhlinzwa. I-thrombectomy kanye nokubuyiselwa kokugeleza kwegazi endaweni ethintekayo yobuchopho kuyenziwa.
Ngemuva kokuqedwa kwesimo esibuhlungu, isiguli sinqunyelwe ukwelashwa kwe-antiplatelet - ama-antiplatelet agents adambisa izidakamizwa ze-cholesterol. Indima ebalulekile ekuhlaselweni yisifo sikashukela i-mellitus ukwelashwa kokudla. Kuqukethe imithetho elandelayo:
kufanele uqale ukudla kahle, futhi futhi ungafaki ama-carbohydrate alula ekudleni,
kuyadingeka ukucubungula amayunithi wesinkwa (ithebula lamayunithi esinkwa lingatholakala lapha),
Gwema ukudla ukudla okunamafutha
imikhiqizo yenyama kufanele isuke enyameni ethambile (inkukhu, inyama yenkomo, unogwaja),
kwenqatshelwe ukuphuza iziphuzo ezimnandi zekhabhoni,
lawula ukudliwa kwezithelo, ikakhulukazi amagilebhisi, amakhabe, amaparele, amapetshisi, ama-apricots,
phuza uketshezi oluningi
khawula ukusetshenziswa kokudla okubunjiwe, okubunjiwe.
Imiphumela yokuhlaselwa yisifo sikashukela i-mellitus ingahluka kakhulu. Ngokuhlinzeka okufika ngesikhathi kosizo oluqeqeshiwe, ukubuyiselwa okuphelele kwemisebenzi kungenzeka. Kepha ngale ndlela ehamba ngayo, izibikezeli ziba zimbi kakhulu. Ngenxa yodonga olushintshiwe lwemithambo yegazi nezinzwa, imiphumela eseleyo izophazamisa impilo yonke.Lokhu kungaba ukuphazamiseka kokuxhumana, i-paresis, ukukhubazeka, ukukhuluma okungasebenzi kanye nekhono lengqondo.
Ngemuva kokushaywa unhlangothi ngemuva kwesifo sikashukela i-mellitus, ukuvuselelwa isikhathi eside nokusebenzisa izivivinyo zokuzivocavoca, ukubhucungwa umzimba, ukwelashwa kwe-spa kuyadingeka.
Okokuqala, ukuvimbela isifo sohlangothi, kufanele uthathe ukwelashwa okwehlisa ushukela: amaphilisi (Metformin, Glibenclamide) noma i-insulin. Ungazinaki izincomo zikadokotela wakho mayelana nokuguqukela ekwelashweni kwe-insulin.
Lokhu kuzohlinzeka ngesexwayiso hhayi ekuthuthukisweni kwesifo sohlangothi kuphela, kepha futhi nokwehluleka kwezinso okungamahlalakhona, i-retinopathy yesifo sikashukela, i-neuro- ne-angiopathy. Izincomo ezilandelayo ziyasiza futhi:
ukudla okwanele kwe-carbohydrate
ukugwema ukudla okunamafutha ekudleni,
ukuthatha imishanguzo yehlisa umfutho wegazi ngokweqile,
isicelo esifike ngesikhathi sosizo lwezokwelashwa,
ukuthatha izidakamizwa ezokwehlisa i-cholesterol, i-lipoproteins ephansi ne-triglycerides (ama-statins),
ukuyeka ukubhema nokuphuza utshwala,
ukugwema ukweqisa kwezinzwa.
Ngokwalokho okushiwo ngenhla, kuyacaca ukuthi ukuphazamiseka okubangelwa yisifo sikashukela kungaholela ekwandeni kwesifo sohlangothi. Umphumela onjalo ungagwenywa kuphela uma izinkomba ze-glucose zigadwe ngendlela ngesikhathi, futhi uma kutholakala izimpawu zokuqala, landela irejimeni yokwelashwa ebekiwe.
UDanilova, N. Isifo Sikashukela. Izindlela zemithi yendabuko neminye ehlukile (+ DVD-ROM) / N. Danilova. - M.: Vector, 2010 .-- 224 k.
Akhmanov M. Amanzi esiwaphuza iSt. Petersburg, Nevsky Prospect Publishing House, 2002, amakhasi 189, ukusakazwa kwamakhophi ayi-8,000.
I-Balabolkin M.I. Diabetesology: monograph. , Imithi - M., 2011 .-- 672 c.
Izimpawu kanye namagama
Ungaselapha kanjani isifo se-ischemic isifo sikashukela
I-Unyango Wezokudla Nezidakamizwa wase-U.S. Ukuphatha unhlangothi igunyaza okuwukuphela kwomuthi, i-tPA. Umuthi uqeda ngempumelelo izingcezu zegazi. Umuthi kumele uphuzwe emahoreni amathathu alandelayo ngemuva kokuthola izimpawu zokuqala zokushaywa unhlangothi.
Umuthi lo unomphumela wejazi legazi elivimbele umthambo, uliqede, ubuyisele ukuhamba kwegazi ezindaweni zobuchopho ezilimele ngemuva kwezinkinga.
I-Ischemic stroke in sikashukela ingalashwa ngokuhlinzwa. Le ndlela iqukethe ekususeni i-plaque eyenziwe odongeni lwangaphakathi lwe-carotid artery. Lo mkhumbi wethula ukugeleza kwegazi okuyinhloko ebuchosheni.
Enye indlela yokwelapha isifo sikashukela yi-carotid endarterectomy. Indlela yokusebenza yenqubo imi kanjena: ekuqaleni, kufakwa ibhaluni emthanjeni we-carotid, obese udonsa futhi unwebe i-lumen encishisiwe. Ngemuva kwalokho kufakwa i-stent yeselula, enikezela ukulungiswa kwe-artery endaweni evulekile.
Ukuze uthuthukise ukusebenza kwemithambo ye-cerebral cerebral arabetes ku-mellitus yesifo sikashukela, i-angioplasty kwesinye isikhathi ibekiwe.
Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2, udokotela wakhe oselutholile isifo sokuqina kwezitho zofuzo, kufanele zihambisane nendlela yokuphila enempilo futhi zilandele indlela ekhethekile yokudla.
Ngakolunye uhlangothi, udokotela kufanele anikeze umuthi isiguli umuthi, ngemuva kokwelashwa okuzovalwa ngalo imithambo yegazi nemingcele yokuthola inkinga enkulu izoncipha kakhulu.
Kunezindlela ezilula zokuvimbela imivimbo. Ngokuya ngemithetho elandelayo, isiguli siqinisekisiwe ukuphepha ngokuya ngesifo esithuthukisayo:
Inani elikhulu lotshwala nokubhema kufanele kulahlwe.
I-cholesterol kufanele ibhekwe njalo, kubhekwe ikakhulukazi izinga “elibi” (LDL). Uma okwejwayelekile kudlulwa, i-cholesterol kufanele incishiswe ngazo zonke izindlela.
Zonke izinsuku udinga ukulawula izinga lomfutho wegazi, ungagcina noma idayari lapho kuzoqoshwa zonke izinkomba.
Iziguli ezingenazo izinkinga zamathumbu ziyelulekwa ukuthatha i-aspirin nsuku zonke.
Iphuzu lokugcina likufanele ukukhuluma ngemininingwane eminingi. Kwabesilisa nabesifazane ngemuva kweminyaka engama-30 behlushwa isifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2, imithamo emincane yomuthi iyamukeleka. Kodwa kunoma yikuphi, ngokuqondene ne-aspirin, isiguli kufanele sibonane nodokotela wakhe.
Umuthi awuhlali uphephile, kwesinye isikhathi ngemuva kokuwuthatha, imiphumela emibi ngendlela yobuhlungu esiswini iyabonakala.
Isifo sikashukela sokudla okunesifo sikashukela
Ukushaywa unhlangothi kuhlangene nohlobo 1 noma isifo sikashukela 2 kudinga ukudla okuthile. Lesi sinyathelo siyadingeka ukuze kubuyiswe umzimba ngemuva kokuhlupheka komoya futhi wehlise nengozi yokuphinde ubuye.
Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2 nesifo sohlangothi, kubekwa iThebhulethi engu-10. Umqondo wokudla ukukhipha ingxenye yokudla egcwele ama-carbohydrate namafutha ekudleni. Ngenxa yalesi silinganiso, inani lamandla lemenyu yansuku zonke liyancishiswa.
Izimiso zokudla yilezi ezilandelayo:
Ukwenqaba usawoti. Okokuqala, umkhiqizo ukhishwe ngokuphelele ekudleni. Ngesifo sikashukela, lokhu kubaluleke kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba inhlala-kahle isiguli izinza, usawoti ungafakwa kancane kancane ezitsheni, kodwa ngamanani amancane.
Imodi yokuphuza. Nsuku zonke, umzimba womuntu udinga isilinganiso esikhulu soketshezi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngesifo sikashukela nohlobo 1, no-2. I-DM yenza igazi lesiguli libonakale ngokwengeziwe, ngakho-ke uketshezi luyadingeka ukuze lunciphise.
Ijusi yezithelo ezinamanzi, amanzi okuphuza ahlanzekile, ama-compotes - konke lokhu kungenzeka ngesifo sikashukela, kepha iziphuzo zekhofi neziphuzo ezinamakhabhoni ziyaphulwa.
Yehlisa i-cholesterol yegazi. Ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ku-cholesterol "embi". Ukudla kokudla kwesiguli, kuyadingeka ukukhipha yonke imikhiqizo enomthelela ekwakhiweni kwento.
Udinga ukukhathazeka ngalokhu kusengaphambili, hhayi lapho kuzoba khona ukuphazamiseka emsebenzini wobuchopho nezinye izinkinga zohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Amavithamini Ukudla kwesiguli kufanele kube nemifino eminingi nezithelo, ngenxa yalokho, izitsha ezinale mikhiqizo ekuqaleni zinconywa. Izithelo nemifino kungadliwa kusha noma kufishiwe, kuyasiza kakhulu. Kunoma yikuphi, ukudla okunoshukela ophezulu kufanele kuthuthukiswe kucatshangelwa zonke izici zesifo sikashukela.
Ukwemukelwa kwe potassium. Isitho esonakaliswe unhlangothi sidinga ukwenziwa nge-potassium. Ngakho-ke, kuyadingeka ukufaka njalo imikhiqizo yokudla yesiguli equkethe le nto ngamanani amakhulu.
Ukwenqaba ikofi. Lesi siphuzo esinesifo sohlangothi sinemishado eqinile. Awukwazi ukudla ukudla nge-caffeine ngesikhathi sokuvuselela umzimba.
Umuntu oye wahlaselwa yisifo sokusha kwe-hemorrhagic noma i-ischemic ebuchosheni ngokwengxenye noma ngokuphelele ulahlekelwe amandla okugwinya ukudla eyedwa. Umkhuba ofanayo ungabonakala kwabanesifo sikashukela, isifo sabo sisekude kakhulu.
Ngokuhlaselwa yisifo sohlangothi, isiguli sinqunywa isondlo sokuhlola, futhi ngesifo sikashukela, kubonakala imenyu esekwe ezitsheni zoketshezi. Yonke imikhiqizo ingaphansi ngesihlungo, futhi iziphuzo zinikezwa ngotshani.
Uma uthola izimpawu zokushaywa unhlangothi ngesikhathi, lapho-ke, ngemuva kokubonisana nodokotela, ungavimba imiphumela ngisho nokufa.
Kuyafaneleka ukubheka lezo zimo:
izingxenye zobuso noma bonke ubuso buqala ukukindeka, ukukhubazeka kwemilenze,
ukwephulwa kokusebenza kokukhuluma,
ukulahleka kokuqonda kwamagama,
ukungasebenzi kahle kwamehlo elilodwa noma amabili,
Ukuxhumana esikhaleni kunzima
isiyezi ngokulahleka kwemali esele,
amathe aginya kanzima
ukwazi kwesinye isikhathi kuyanyamalala, okugcwele ukukhubazeka,
ukuphazamiseka kokulala, ukuqwasha.
Ukushaywa yisifo sikashukela i-mellitus kubonakaliswa ukuqala okungazelelwe kanye nokuhlehla kwesimo. Ukukhubazeka kwethambo sekuyisibonakaliso sokuhlaselwa.
Izikhathi eziphawula ukuthi kunesifo sohlangothi lwe-ischemic ku-mellitus yesifo sikashukela:
Izimpawu aziveli ngokushesha, zikhula kancane kancane. Izimpawu zokuqala zingafakwa obala.
Ngenxa yomfutho wegazi ophakeme njalo, izindonga zemithambo yegazi zingaba mncane, bese ziqhuma. Lokhu kuholela ku-necrotic neoplasms.
Kunzima ukubona, ukuhlaziya, nokucubungula imininingwane. Kunezinkinga ezinkulu zememori. Ama-algorithms wokuxhumana nemvelo kanye nemvelo yenhlalo ayahlanekezelwa.
Kune-coma yesifo sikashukela ngenxa yokugxuma okubukhali kushukela we-serum.
Ukushaywa yisifo sikashukela kunikeza izilonda eziningi kunakwezinye iziguli ezingenashukela.
Kunobungozi obukhulu bokuqothuka kwenhliziyo. Kubandakanya ukwenzeka kwe-myocardial infarction.
Lapho igazi liyeka ukujikeleza ngohlelo lwe-vascular, njengabantu abanempilo, okubangela ukuqina, kunengozi yokuhlaselwa yisifo sikashukela. Imvamisa, ngokumelene nesizinda salesi sifo, kwenzeka, kuba namacala ahlehlisayo, kepha asivamile.
Ngokuya kobucayi besimo sesiguli, i-anamnesis iyaqoqwa. Kuhlolwa kwangaphandle. Ukwehluka kwezinye izifo: Ukulimala kobuchopho obuhlungu, isithuthwane, i-encephalopathy enobuthi. Uhlobo lokushaywa kunqunywa.
Ngemuva kwalokho izinsimbi zokuxilonga ziyenziwa. Ngokusebenzisa i-tomography, ukwenziwa kwendawo kwesilonda, ubungako bayo, izinga le-edema yamakhorali, kanye nokuxilongwa kwe-aneurysm yamakhemikhali kuyacaciswa.
Uma kwenzeka kuphuthumayo, kufundwa uketshezi lwe-cerebrospinal - ukwenziwa kwe-lumbar kwenziwa.
Ukuthola izimbangela, kwenziwa ukuhlolwa kwegazi, i-ECG, i-urinalysis, i-echocardiography.
Isixhumanisi phakathi kwesifo sikashukela nesifo sohlangothi
Izindonga zemithambo yobuchopho zithinteka yisifo sikashukela, ukuhlaselwa okuphindaphindiwe kuyacasulwa. Ngenxa yamakhemikhali e-cholesterol, ukungcoliswa kwemithambo kukhulisa umthwalo emzimbeni wonke.
Izingozi ziyanda nge:
ukukhuluphala, ikakhulukazi uma kunamanani amaningi ngokweqile endaweni okhalweni,
i-prediabetes - ukukhuphuka ushukela.
Isifo sikashukela kanye nesifo sohlangothi kuyaxhunyaniswa, siqhamukele kwesinye.
Izici zokwelashwa kokuhlaselwa yisifo sikashukela
Umuntu oshaywe unikezwa usizo lokuqala. Ukugxila kwe-lesion kungenzeka kuncishiswe, kwenziwa umsebenzi wokungenelela kokuhlinzwa. Imvamisa, i-ischemic stroke sitholakala kwisifo sikashukela.
Lapho nje kutholakala ibalagi elinqamula umkhumbi, kukhethwa izindlela zokususa. Lapho nje ukususwa kwegazi kususwe, ukuphuma kwegazi kuyabuyiselwa. Nge-thrombus ku-carotid artery, impilo yesiguli isengozini enkulu kakhulu, futhi i-angioplasty iyenziwa.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngesifo sohlangothi kwenziwa ngudokotela, unikezwe nemithi ebekiwe. Lokhu ngokuyisisekelo:
izidakamizwa ezikhulisa ithoni ye-vascular,
amalungiselelo egcwele umoya-mpilo
Vitamin B noVitamin C.
Ngokushesha lapho inhlala kahle isiguli izinza, izinketho eziningana zokuthuthuka zingenzeka:
isiguli sibuyela kokujwayelekile ngemuva kwemizuzu embalwa ngaphandle kwemiphumela emibi,
izingxenye ezilimele zobuchopho ezibhekene nenkulumo, uhlelo lwesisu,
ngemuva kwesikhashana, lesi simo siyaqhubeka ngokuba sibi kakhulu ngezimpawu ekuthandeni ukoma.
Ngokuphikisana nesizinda sikashukela nesifo sohlangothi, ezinye izifo zezitho zangaphakathi zingenzeka. Ukwelapha kuleli cala kuwuphawu.
Ukuncoma komuntu ngamunye ngokudla kungabikwa udokotela oholayo. Ukudla okulinganiselayo kunciphisa ingozi yokuphindeka unhlangothi, ngenkathi ukudla kungenziwa okuhlukahlukene kakhulu.
Ukudla njalo ngokusho kohlelo lokudla olwenziwe ngumuntu onondlayo.
Nakisisa ukusetshenziswa kwezithelo, imifino, okusanhlamvu.
Kunamapharagi wobisi. Ungadla, irayisi, nokunye okufana nokolweni.
Qapha njalo ukwakheka kwemikhiqizo edliwayo - bona okubhalwe ephaketheni.
Inyama kufanele ibiliswe, hhayi ukuthosiwe. Lokhu kuzonciphisa inani lamafutha aqediwe.
Ukuvinjelwa kwekhalori. Ukusebenza ngosayizi kungancishiswa.
Ukukhishwa kotshwala. Izindonga zemikhumbi ziba buthaka, futhi umfutho wegazi ungagxuma kakhulu, okuvusa ukushaya okwengeziwe.
Phuza uketshezi oluningi ukuvikela izimpawu zokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, igazi liba i-viscous futhi ukuze linciphe, kuyadingeka ukusebenzisa inani elanele lamanzi. Okuthandwayo kunikezwa kumajusi ahlanjululwe, iziphuzo zezithelo, amanzi ngaphandle kokungcola.
Ngemuva kokushaywa unhlangothi, i-potassium iyadingeka. Kuyadingeka ukufaka kwimenyu eyisisekelo namanje ukudla okuqukethe le nto ngamanani anele. Iwusizo kwimisipha nemithambo yegazi.
Iziphuzo ezimnandi noshukela azifakiwe.
Noma imiphi i-carbohydrate esheshayo inqatshelwe: i-khekhe, amaswidi.
Ukudla okuqukethe amafutha (amaqanda, ibhotela, imayonesi) kufanele kuthathelwe indawo uwoyela wemifino.
Ngokushesha nje lapho unhlangothi luhlaselwa yiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 nokuxilongwa okwalandela kwe-atherosclerosis, kudingeka ukudla okuyisipesheli.
Abantu abahlaselwe yisifo sikashukela basebenzisa ukudla kweTafula 10. Lokhu kudla kunciphisa inani lamandla lokudla nsuku zonke, ngenxa yokubandakanyeka kokugcotshwa kwamafutha kanye nama-carbohydrate. Yini enomthelela ekujwayekeni komzimba ngemuva kwezimo ezicindezelayo.
Inani usawoti lehla ngenkathi kuphekwa futhi ayifakwanga okokuqala ngemuva kwesigameko kuze kube ngokwejwayelekile kwempilo.
Lezo ziguli ezilulile ekushayweni unhlangothi zingasebenzisa izingxube ezilungiselelwe ngokukhethekile zalokhu. Uma kunezinkinga ngokuhlafuna nokugwinya ama-reflexes, khona-ke ukondla kwenziwa ngohlobo olukhethekile lokudla.
Konke ukudla okwakha i-cholesterol kufanele kungafakwa ekudleni.
Umzimba wesiguli udinga amavithamini. Kulokhu, kunconywa ukudla okunemifino eminingi nezithelo. Ukusetshenziswa kwabo kungenzeka kokubili ngesimo se-steam futhi esisha. Amanani we-glucose kufanele abhekwe egazini.
Njengoba unesifo sikashukela, udinga ukuya esikoleni sabanesifo sikashukela, lapho kuchazwa khona konke ukubhekana nezimpawu nezimpawu. Lokhu kuzosiza ngesikhathi esifanele. Ukuze uvikele lezi zimo, indlela yokuphila uqobo iyalungiswa, okubandakanya izici eziningi zempilo yomuntu.
Ukuphila kokuhlala phansi kuyaphulwa. Kuyadingeka ukugcina isimo somzimba sesimweni esihle somzimba: yenza iqoqo lokuzivocavoca, uhambe ngokulinganisela, futhi uma kungenzeka uvakashele ichibi.
Buyisela isisindo somzimba emuva kokujwayelekile ngokushesha okukhulu. Lawula isisindo sakho.
Utshwala nogwayi abukhishwa. Banomphumela omubi kakhulu emithanjeni yegazi kanye nomfutho wegazi.
Gwema izimo ezicindezelayo noma nini lapho kungenzeka.
Njalo ulandele ekudleni. Lokhu kungenye yezinsika ezibalulekile zokwelula impilo.
Uma kwenzeka kweqa noma yiziphi izinkomba ezitholwe yi-glucometer, uzoxhumana nodokotela ukuze ahlolwe ngokuphelele.
Abesilisa nabesifazane abaneminyaka engaphezu kwengama-30 ubudala basebenzisa izidakamizwa ezingaphansi kwezinye izifo ezengeziwe. Basebenzisa i-aspirin ngokuqapha, ngaphambi kokuthi babonane nodokotela wabo, ngoba imiphumela emibi kungenzeka.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngemuva kokushaywa unhlangothi
Ukudla for unhlangothi kanye nesifo sikashukela